Kulan dhexmaray Puntland iyo ciidanka NATO - BBC Somali
Kulan dhexmaray Puntland iyo ciidanka NATO
Image caption Burcad-badeed Soomaali ah
Kulan ay ka qaybgaleen madax ka socota maamulka Puntland oo ay wehliyaan odayaasha dhaqanka ee degaannada xeebaha ee Puntland qaarkood iyo saraakiil ka tirsan NATO ee la dagaallanka burcad-badeedka ayaa ka dhacay dusha markab ay leeyihiin ciidamada NATO . Kulankaas ayaa la sheegay in lagaga hadlay arrimo kala duwan oo la xiriira sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka lagula jiro burcadda badaha.
Kulankan ayaa dhinaca Puntland waxaa ka qaybgalay wafdi ballaaran oo uu horkacayo wasiirka dekedaha Siciid Max’ed Raage oo ay ka mid yihiin xubno ka socday hay’adda la dagaallanka burcada badaha ee Puntland iyo saraakiil ka tirsan ciidanka badaha ee Puntland.
Waxa kale oo wafdiga Puntland ka mid ahaa cuqaal ay tiradoodu gaarayso 37 xubnood oo ka socday 13 degmo oo ka tirsan gobollada Bari, Sanaag iyo Karkaar waxana wafdiga Puntland uu la kulmay wafdi ka socda ciidamada NATO ee ku hawlan la dagaallanka burcadda badaha kaas oo uu horkacayay admiral Ben Bekkering oo ah madaxa hawlgallada ciidamada NATO ee xilligan.
Arrimo kala duwan oo la xiriira dhinaca burcadda badaha ayaa kulankan lagu soo qaaday iyadoo la isla meel dhigay sidii loo heli lahaa iskaashi buuxa oo ay yeeshaan maamulka, bulshada xeebaha ku dhaqan iyo NATO sida uu tilmaamay wasiirka dekedaha ee Puntalnd Siciid Max’ed Raage.
Doodo iyo aragtiyo kala duwan ayaa kulankan ka dhacay, waxana jira qodobbo dhowr ah oo ay soo jeediyeen odayaashii kulanaas ka qaybgalay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in ciidamada NATO ay wada-shaqayn buuxda la sameeyaan maamulka Puntland iyo in hawlgallada NATO ay noqdaan kuwo taxaddar leh si loo kala saaro dadka kalluumaysatada ah iyo burcad-badeedka.
Waxaa kale oo ay duqowdu soo jeediyeen in NATO ay maamulka Puntland ka caawiso dagaal ay dhianca berriga kala gasho burcadda badaha, iyo in maxaabiista ay qabtaan ciidamada NATO ee kasoo jeedda Puntland ama xeebaha Puntland laga qabto lagu wareejiyo maamulka Puntland.
Marka laga yimaado kulankan waxaa jiray kulamo kale oo horay u dhexmaray ciidamada NATO iyo madaxda dhaqanka ee xeebaha Puntland, haddaba muxuu kulankani kaga duwan yahay kulamadii hore ama uu kusoo kordhin kaarayaa, jawaabta su’aashan waxaa faahfaahin kabixiyay agaasimaha hay’adda la dagaallanka burcadda badaha ee Puntland C/risaaq M.Dirir oo sheegay in ciidamada NATO ay degaanada xeebaha sida Murcayo iyo Xaabbo ay hirgelinayaan xarumo caafimaad oo si wanaagsan u qalabaysan.
Masuuliyiintii kulankan ka qaybgalay waxay tilmaameen in saraakiisha ciidamada NATO ay aad u soo dhoweeyeen dowrka iyo kaalinta maamulka iyo shacabka Puntland ay kaga jiraan dagaalka ka dhanka ah burcadda badaha iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada caalamiga.
Masuuliyiintu waxay intaas ku dareen in saraakiisha NATO ay soo dhoweeyeen dhammaan qodobbadii loo jeediyay marka laga reebo arrinta la xiriirta soo wareejinta maxaabiista ay qabtaan taas oo ay ku xireen marka maamulka Puntland uu dhammaystiro xabsiyada loogu talagalay burcadda badaha ee haatan gacanta lagu hayo dhismahooda.